Clipcentric: Ogaranya Media na Video Ad Creative Management | Martech Zone
Clipcentric na-enye ndị ọrụ ya ọtụtụ nhọrọ nke ngwa ọrụ na ndebiri na-enye njikwa zuru oke na usoro ọ bụla nke usoro mmepụta na-eme ka mgbasa ozi mgbasa ozi ọgaranya na-anabata n'ezie. Ndị otu mgbasa ozi nwere ike ịmepụta ngwa ngwa ma zụlite mgbasa ozi HTML5 siri ike nke na-agba ọsọ n'enweghị nsogbu na gburugburu ebe obibi.
Ebe Ọrụ Drag-na-Dobe - N’inwe ezi uche dọrọ na dobe ngwungwu mgbasa ozi n’ime ebe ọrụ akọwapụtara ngwaọrụ maka njikwa zuru oke, yana ebe ihe ị hụrụ bụ ihe ị nwetara.
Detuo HTML5 Ikike - Mepụta ọkaibe HTML5 ihe ngosi na-eji usoro iheomume na igodo, mejupụta ya na omume, hotspot, yana mmekọrịta ya na ihe mgbasa ozi ndị ọzọ.
Mmemme mmemme - Jikwaa ihe okike na-eme ihe site na iji iwu data data ndị ahịa akọwapụtara n'oge mgbasa ozi ma ọ bụ dịka akọwapụtara site na ntanetị oge ma ọ bụ na mpụga data ntanetị.
Ngbanwe zuru ezu - Wụpụta ụdị mgbasa ozi ọ bụla, site na isi nnabata templatized IAB ebili Stars na usoro nke igbe nke igbe, ma nwee ntụkwasị obi na ha dị njikere ije ozi n'ụzọ dị mma n'ofe ngwaọrụ niile.
Atsdị gụnyere na-ọkọlọtọ, expandable, sere n'elu, na akwụkwọ ahụaja mgbasa ozi wuru maka mobile, mbadamba, desktọọpụ, na-ngwa, HTML5 na video nyiwe.
Clipcentric na-ewepụ ọnụ ahịa na ihe mgbochi dị mgbagwoju anya nke ejikọtara na mgbasa ozi bara ụba na mmepụta mgbasa ozi vidiyo, na-enye ndị ahịa anyị ohere ịmepụta ngwa ngwa na mgbasa ozi ngosi bara ụba na ụlọ, na-akwado azụmaahịa na akuko ngwa ngwa.
Ejiri ụlọ ọrụ ihe nkiri VideoAd dọrọ na dobe nchịkọta akụkọ iheomume nke na-enye ndị ọrụ mgbanwe iji chịkwaa akụkụ ọ bụla nke mgbasa ozi vidiyo. Bulite ọdịnaya vidiyo ma jiri eserese mmegharị, nsonaazụ ụda, na egwu hazie mgbasa ozi ahụ. Mepụta mgbasa ozi site na isi site na iji nchekwa data ha nke obere vidiyo maka obere azụmaahịa.
Clip-centric usoro iheomume Editor Mmepụta vidiyo ngwa ngwa na ngwa ngwa na interface ejiri maka ụlọ mgbasa ozi. Naanị ịdọrọ ọdịnaya gị n'ime usoro iheomume wee mezie nlezianya anya.
Ebe nchekwa data ọdịnaya - Nweta ọba akwụkwọ anyị nke obere vidiyo, egwu egwu, nsonaazụ ụda, na eserese eserese iji mepụta vidiyo vidiyo dị elu na-enweghị mmefu mmepụta.
Mgbanwe mmepụta - Ebumnuche na-enweghị ike itinye vidiyo gị na mgbasa ozi mgbasa ozi gị bara ụba, na-eje ozi na ntanetị ka ndị ọkpụkpọ vidiyo tozuru oke ma ọ bụ okporo ụzọ gaa na telivishọn.
Tags: clipcentricmgbasawanye vidiyo mgbasasere n'elu video mgbasa ozina-ọkọlọtọ video mgbasa oziọgaranya mgbasa ozimgbasa ozi mgbasa ozi bara ụbammepụta vidiyomgbasa ozi vidiyoakwụkwọ ahụaja mgbasa ozi
AdButler: WordPress Integrated Ad Ije Ozi